Inona ireo fomba hanatsarana haingon-dresaka?
Ny fananganana tranokala no singa fototra sy ny endrika sarotra indrindra amin'ny fanatsarana ny fikarohana. Misy fiantraikany eo amin'ny toerana misy ny tranonkala izany ary mamolavola ny endriky ny Google momba ny sehatra manokana. Ny anjara asan'ny rohy tafiditra ao amin'ny SEO dia naseho tamin'ny isa maromaro momba ny fanadihadiana.
Na dia izany aza, mbola misy ihany ny ahiahin'ny sasany amin'ny webmasters momba ny fiantraikany sy ny tombontsoa avy amin'ireo rohy tafiditra. Miteny izy ireo fa mihena ny fitokisan'i Google amin'ny backlinks. Na izany aza, tiako ny hitondra azy ireo any. Tsy afaka hanjavona amin'ny fotoana rehetra ny backlinks raha vao mandray anjara mavitrika amin'ny algorithm Google. Ny fikarohana vao haingana dia mampiseho fa ny isan'ireo domains mifandray amin'ny pejy mifangaro kokoa noho ireo antony hafa rehetra. Raha tsy mandray tsara an'io angon-drakitra io ianao, dia miezaha mitady fikarohana. Ampidiro ao amin'ny Semalt Web Analyzer ny teny fototra misy anao ary hijery ireo pejin-dahatsoratra ambony indrindra. Samy manana rohy marobe izy ireo. Na dia tsy dia be loatra aza ny tenimiafina voamarinao, ny tranonkala TOP ranking dia manana rohy maromaro.
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hanamboarana rindran-damina haingana sy mahomby. Nampiasa sasantsasany amin'ireny rindrambaiko tetik'ady ifanakalozan-kevitra ireny izahay mba hanatsarana ny lozam-pifandraisan'ny mpanjifa. Nahazo vokatra tsara izahay ary nitombo ny rohy momba ny mpanjifanay.
Noho izany, andeha isika handroso! Antenaiko fa ity fampahalalam-baovao ity dia hanana anao mba hahazoana jiro fifandraisana tsara amin'ny tranokalanao.
Strategie manomboka amin'ny fananganana backlinks haingana sy mahomby
Mamorona rohy rohy miaraka amin'ny motera fikarohana
lalàna, tranonkala mifandray aminao amin'ny lasa dia mety mbola hanao izany indray. Manao izany izy ireo satria efa mpankafy ny zavatra ataonao sy soratanao. Azo inoana fa liana kokoa amin'ny votoatin-javatra vaovao navoakanao sy hampifandraisana azy io izy ireo. Ny sary izay manana tahirin-tserasera amin'ny loharanon-tranonkala rehetra mifandray aminao, ary, noho izany, dia mety ho liana amin'ny votoatiny vaovao. Tsy isalasalana fa ho mahery vaika ho an'ny orinasanao an-tserasera ianao satria afaka mahazo fitohizan'ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao.
Azonao atao ny manangana tahiry toy izany amin'ny alalan'ny CSE an'ny Google. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny hanaraka ireo dingana ireo:
Mitadiava loharanom-pejy izay efa mifandray aminao;
Ampidiro ao anaty motera fikarohana ireo loharano ireo;
Mitadiava tombontsoa fifandraisana amin'ny ho avy.
Mianteha amin'ny fitaovana CSE Google ary mamorona motera vaovao any. Ampidiro ao amin'ny tranonkala iray tianao hikaroka sy ny anaran'ny motanao vaovao tianao. Mandehana mankany amin'ny tabilao manaraka ary jereo ny lanjany ao amin'ny cell A1. Tokony hofaritana ho "sehatra" izany. fr. "Mila mandefa kopia an'ity rakitra ity ianao ao amin'ny" tranokalan'ny fikarohana "ao amin'ny motera findainao. Ary farany, tsindrio ny bokotra "mamorona".
Na izany aza, raha te hikaroka sehatra maro avy amin'ny mombamomba azy ianao, dia mila ampidirinao ny faritra misy anao. Izany no antony ilainao hikirakirana ny bokotra "manova fikarohana" ary hanampiana tranonkala hafa. Azonao atao ny misafidy ny safidy "hanampiana ireo tranokalam-pifaneraserana" ary hamoaka ny lisitry ny sehatra ao anaty boaty. Misafidiana asa iray "ampidiro ny pejy rehetra eto amin'ity tranonkala ity" ary tsindrio "save. "
Ankehitriny, vonona ny motera findainao. Azonao ampiasaina izany mba hitadiavana ny fananana fanavaozana fifandraisana amin'ny fotoana ifampizaranao votoaty vaovao.
Ity tetika fantsona ity dia mety ho lasa tsaratsara kokoa raha mitombo ny pejin-tseraserao satria manana tahiry betsaka kokoa avy amin'ny loharanom-baovao maro hitadiavana Source .